Zithini izibonelelo zokuthenga ababhalisile kwiYouTube?
Ikhuthaza abanye ukuba babhalise kwisitishi sakho
Ababhalisi baya kubambelela kwaye bangasuswa
Ukuhanjiswa okukhuselekileyo nokuqinisekisiweyo
Iziphumo ziqala ngaphakathi kweeyure ezingama-24-72
Fumana naphi na kubabhalisi abangama-10-100 ngosuku
Sisoloko sihambisa ngaphezulu kunokuba ubuyalele!
Izizathu eziphambili zokuba kutheni kufuneka ucinge ngokuThenga ababhalisile bakaYouTube
Ngaba ujonge ukuba nguYouTube? I-YouTube yindlu yamandla kwezentlalo kunye nesenzeko sehlabathi esitsala amawaka ezigidi zababukeli kwihlabathi liphela. Nokuba ulishishini elizinzileyo, uqalile, okanye ufuna ukubonisa italente yakho, iYouTube lelona qonga lifanelekileyo lokufezekisa iinjongo zakho zentengiso.
Ukuba nguYouTube ophumeleleyo kuya kubandakanya ukwakha isiseko sakho somrhumo kunye nokufumana inani eliphezulu lezabelo, izinto ozithandayo kunye nezimvo. Ngelixa iimethrikhi ezinje ngezabelo, ukujonga ividiyo, kunye nezimvo zibalulekile, ukonyusa inani lababhalisile kubaluleke ngakumbi.
Ukudala umxholo osemgangathweni kuya kunceda, kodwa ividiyo yakho inokungcwatywa kwizigidi ezifanayo-okanye ezingcono-iividiyo ezilayishwa yonke imihla kwiYouTube. Ukuchaneka, ngaphezulu kweeyure ezingama-500 zomxholo wevidiyo ulayishwa ngomzuzu ngamnye, kwaye iiyure eziyibhiliyoni zomxholo zibukelwa yonke imihla kwiYouTube.
Eyona ndlela ikhawulezayo yokwandisa inani lababhalisi ku bathenge ababhalisile kwiYouTube evela kwinkampani yeenkonzo zentengiso yakwaYouTube eyaziwayo.
Nalu ujongo olusondeleyo kwinto eyenza iYouTube ibe sisixhobo sokuthengisa esidumileyo kunye nezizathu eziphezulu zokuba uthenge ababhalisile.
Yintoni eyenza iYouTube ibe sisixhobo sokuthengisa esidumileyo?
Uphando lwango-2021 olwenziwa yiPew Research Centre luveze ukuba iYouTube lelona qonga lidumileyo e-US, uninzi lwabantu baseMelika belikhetha ngaphezu kwamanye amajelo.
Ukusukela ngo-2005 xa yayiphehlelelwa, iYouTube iye yaseka ubukho obuqinileyo kumazwe alikhulu kwihlabathi liphela, ithatha i-95% yabemi be-intanethi behlabathi.
Nazi ezinye iinyani ezimangalisayo kunye namanani e-SEM Rush abonisa ukuba kutheni iYouTube ilukhetho olucacileyo lwabathengisi:
UYouTube okwangoku unabasebenzisi abazibhiliyoni ezi-2 kwihlabathi liphela.
Iibhiliyoni ezintlanu zeevidiyo kuYouTube zijongwa yonke imihla nto leyo iguqulela kwiibhiliyoni zeebhiliyoni zokusetyenziswa komxholo wevidiyo ngosuku.
Iipesenti ezingama-74 zabantu abadala baseMelika babukela iividiyo zeYouTube.
Ababukeli bachitha imizuzu engamashumi amane ngokomndilili kwiividiyo zikaYouTube.
Ngo-2022, kuqikelelwa ukuba abantu abazizigidi ezingama-210 baya kubukela iividiyo zikaYouTube eMelika
Ngaphandle kweMillennials, i-demographic ekhula ngokukhawuleza ibandakanya i-50 ukuya kwi-65 yeminyaka ubudala (i-Baby boomers) kunye ne-36- ukuya kwi-49 yeminyaka ubudala (iGeneration X).
Ngo-2019, abantu abazibhiliyoni ezi-2 kwihlabathi liphela bangene kwaye babukela iiyure eziyibhiliyoni zeevidiyo zikaYouTube suku ngalunye.
UYouTube ubalelwa malunga nekota yokusasazwa kwevidiyo yehlabathi, okwesibini kuphela kwiNetflix.
Ngaphandle kokuzonwabisa, abantu babukela iividiyo zikaYouTube ngeendaba, ulwazi, ukomeleza umsebenzi wobuchwephesha, kwaye balandele iinkampani kunye neempawu.
Abantu abathandathu kwabalishumi bakhetha ukubukela iividiyo kunomabonakude ngqo
Izizathu eziphambili zokuthenga ababhalisile bakaYouTube
Ngokungathandabuzekiyo uYouTube lelona qonga lilungileyo lokubonisa italente yakho okanye usasaze ulwazi ngomsebenzi wakho. 'Abasebenzisi bakaYouTube' abaphumeleleyo ngabanye babona bantu baziwa kakhulu kwi-intanethi. Nokuba bathumela iividiyo zemidlalo, iivlogs zokuhamba, okanye 'njani' iividiyo, aba YouTube badumileyo bazakhele uphawu lwabo kwaye babonise ubugcisa babo kuYouTube. Inyathelo lokuqala lokuba nguYouTuber ophumeleleyo kukufumana ukuthandwa.
Ezinye zezona ndidi zevidiyo zidumileyo kuYouTube zezi:
Uhlaziyo lwemveliso Ukusukela ngo-2017, ababukeli bakaYouTube babukele i-50,000 kunye neminyaka yeevidiyo zokuphononongwa kwemveliso kwizixhobo eziphathwayo. Uphononongo oluthembekileyo ludlala indima ebalulekileyo ekukhuthazeni abathengi ukuba bathenge. Iividiyo zokuphononongwa kwemveliso zivumela abaphulaphuli ukuba babone ukusebenza kwemveliso kwaye bafumane impendulo kumhloli.
Iividiyo ezingenabhokisi -Iividiyo ze-unboxing zibe yimpembelelo enkulu kwizigqibo zokuthenga zababukeli. Zikwayindlela esebenzayo yeebrendi zokusasaza ulwazi ngeemveliso zabo ezintsha okanye iinkonzo.
IiVidiyo zezeMfundo -Ababukeli bathanda iividiyo zeYouTube malunga neendlela zefashoni, ubugcisa bokubonwayo, imbali, imathematika, ishishini kunye nezinye izihloko.
Umngeni kwiividiyo Ukusuka 'kuMceli mngeni we-Highlighter' ukuya "kwizinto ezonwabileyo nezingacwangciswanga ngam," ithegi kunye neevidiyo ezicela umngeni zithandwa kakhulu. Le fomati yevidiyo ikhuthaza abasebenzisi ukuba babukele abadali benza umngeni ngeendlela ezizodwa.
Uhlobo – Iividiyo ezihlekisayo ziphakathi kweefomati ezinethuba eliphezulu lokufikelela kwimo 'yentsholongwane'.
Gaming Ukusuka 'kwiMinecraft' ukuya 'kwiLeague of Legends,' iividiyo zokudlala ziludidi oludumileyo kuYouTube.
Iiplogi -Iibhlog zevidiyo okanye iiblogi zevidiyo zivumela abalandeli ukuba babone 'eyokwenyani' kwaye banxibelelane nawe. Ii-vlogger eziphezulu zihlala zinezigidi zababhalisi.
Nokuba wenza ividiyo ekumgangatho ophezulu kwi-niche yakho kwaye uyithumele, akukho siqinisekiso sokuphumelela kwangoko. Isenokubonakala ngathi i-YouTubers yentsholongwane inemfihlo, ifomula yomlingo kudumo lwe-intanethi kwangoko. Barekhoda nje ividiyo kunye neposi, kwaye izigidi zeembono kunye nababhalisi balandela. Ngelixa oku kunokusebenzela abantu abadumileyo kunye neetshaneli ezidumileyo, abaqalayo kuya kufuneka baqale ngokukhawuleza ngokuthenga ababhalisile bakaYouTube.
Ividiyo ye-YouTube ithathwa ngokuba "ilungile" ukuba ine-CTR (izinga lokucofa) elingaphezulu kweepesenti ze-10, iipesenti ze-50 zokugcinwa, kunye nemizuzu emine yexesha eliqhelekileyo lokubukela.
Ireyithi yokucofa okanye i-CTR ibalwa ngokwahlula inani lokucofa kwividiyo yakho ngemifanekiso ye-thumbnail (ividiyo ye-teaser). Umzekelo, ukuba i-thumbnail yakho yevidiyo ijongwe amaxesha ali-1,00 kwaye abantu abali-10 bacofa kwividiyo, ireyithi yokucofa yi-10 pesenti.
Okukhona inani lababhalisi kwiakhawunti yeYouTube, angcono amathuba okunyusa iCTR, ukugcinwa, kunye nexesha lokubukela.
Ngokoqikelelo, kunokuthatha phantse iminyaka emibini ukufumana ababhalisile bakho bokuqala kwiYouTube. Oku kunokuba ngamava acothayo kakhulu kwaye ayakhathazayo kubantu abajonge ukwenza uphawu lwabo ngokukhawuleza kwisitishi.
Xa uthenga ababhalisile beYouTube, unokwakha kwaye ugcine amandla. Ukuthenga ababhalisile bakaYouTube kuya kuthumela umyalezo nakwabanye abasebenzisi bakaYouTube ukuba umxholo wakho udumile kwaye unexabiso.
Nje ukuba inani lababhalisile bakho liye landa, liya kutsala abantu abaninzi ngakumbi ukuba bajonge ividiyo yakho kwaye babhalise kwijelo lakho.
Yiya kwiselula ukwandisa ukufikelela kwakho
Ngaba unaso isicwangciso sentengiso yamajelo amaninzi? Intengiso yeselula sisicwangciso sokuthengisa idijithali esijolise ekufikeleleni kubaphulaphuli kwizixhobo eziphathwayo, kubandakanywa iipilisi kunye nee-smartphones. I-Statista iqikelela ukuba kukho abantu baseMelika abazizigidi ezingama-290 abangabasebenzisi beefowuni eziphathwayo ngo-2020 ukuza kuthi ga ngoku. Ukunikezelwa kwe-smartphone yokungena kweepesenti ze-79.10, i-US ingowesine kwihlabathi malunga nabanini beefowuni eziphathwayo.
Ngabaxumi abatshintshela ingqalelo kwizixhobo eziphathwayo, abathengisi babeka phambili ukubandakanyeka kwe-omnichannel kunye nabaphulaphuli abajolise kubo ngentengiso yeselula. Ukuthengisa ngeselula kunokubandakanya ukuthumela imiyalezo ye-brand ngeSMS okanye iifowuni ezibandayo. Ezi zicwangciso zentengiso zokutyhala zinemiqobo emide kunye neyexesha elifutshane. Abathengi banokuvala iminxeba ngokulula kwaye batyhale iintengiso. Kubathengisi, ukulandelela imbuyekezo kutyalo-mali kunye nokujolisa kwisiseko sabathengi abathile kuba nzima kunye nokuthengiswa kwe-push.
I-YouTube iyifanele ngokupheleleyo indlela yokuthengisa yangaphakathi okanye yokutsala kwizixhobo eziphathwayo. Ngokuthengisa kwangaphakathi, iibrendi zinokubandakanya kwaye zimeme abathengi abajolise kuzo kunye nokwakha ubudlelwane obuluqilima.
La manani nguHubSpot abonisa ukuba kutheni iYouTube ilukhetho olufanelekileyo kwintengiso yeselula:
Uninzi lwabantu abadala (ipesenti ezingama-75) babukele iividiyo zeYouTube kwizixhobo zabo eziphathwayo.
UYouTube ufikelela abantu abaninzi abakwiminyaka eli-18 ukuya kuma-49 kwizixhobo eziphathwayo ngeveki xa kuthelekiswa nayo nayiphi na inethiwekhi yentambo.
Ngaphezulu kwesithathu-kwesine sexesha lokubukela likaYouTube likwizixhobo eziphathwayo.
Uphononongo lukaGoogle lubonisa ukuba abasebenzisi be-smartphone banamathuba angama-1.4 ngaphezulu kokunikela ingqalelo kumxholo ophawulweyo okanye iintengiso kwiYouTube.
Abaphandi bafumanise ukuba ababukeli bevidiyo be-smartphone banokuziva beqhagamshelwe kwiibrendi ezibonelela ngomxholo wevidiyo kwizixhobo eziphathwayo xa kuthelekiswa nababukeli beTV. Kwaye ngaphezu kwayo yonke into, uphononongo luka-2020 lubonise ukuba iipesenti ezingama-70 zababukeli zithengiwe emva kokubona ividiyo yophawu kuYouTube.
Ezinye izinto ezenziwa ngababukeli emva kokubukela iividiyo ezinophawu kwizixhobo zabo eziphathwayo ziquka:
Ndwendwela iwebhusayithi yebhrendi okanye ivenkile.
Thetha ngophawu nabanye.
Batshintshe ngokufanelekileyo uluvo lwabo malunga nebrendi, inkonzo, okanye imveliso.
Yabelana ngesiqulatho sevidiyo enegama malunga nenkonzo, imveliso, okanye inkampani.
Indlela ekrelekrele yokudala iqhinga lokuthengisa eliphumelelayo kukwenza iividiyo zentengiso kwiYouTube kwaye uzikhuthaze kubaphulaphuli ababanzi ngokuthenga ababhalisile beYouTube. Abantu bajonge iindlela zokuthatha isigqibo malunga nokuba babukele ntoni kwimidiya yoluntu kwaye luhlobo luni lomxholo olufanele ixesha labo. Ukuba iakhawunti yakho yeYouTube inamawakawaka ababhalisile, ibonakala njengeakhawunti ethembekileyo elandelwa ngabantu abaninzi.
Yongeza iinzame zakho zokuthengisa
Kwiimpawu, ukuba neqhinga lentengiso yeYouTube yeyona nto iphambili. Iividiyo ezibandakanyekayo zinceda ukukhulisa imemori yebhrendi kunye nokukhumbula ngenxa yokuba izinto ezibonwayo zicutshungulwa ngokukhawuleza xa kuthelekiswa nemiyalezo ebhaliweyo. Iividiyo zeYouTube zinokunceda ishishini lakho liqhube itrafikhi kwiwebhusayithi yakho okanye ivenkile ye-e-commerce, yandise iinguqulelo kwaye ifikelele kwisiseko esibanzi sabaphulaphuli. Ukuba nobukho beYouTube kwenza kube lula kubaphulaphuli ojolise kubo ukuba bakufumane kwiinjini zokukhangela. Ungasasaza isiganeko esibukhoma ngeYouTube. Oku kuveza ibhrendi yakho kunye nemveliso okanye inkonzo kubaphulaphuli ababanzi ngendlela eyongayo.
Isicwangciso sakho sokuthengisa seYouTube sinethuba eliphezulu lokukunika iziphumo ezinqwenelekayo xa unesiseko esinamandla sababhalisi.
Ukuthenga uluhlu lwababhalisile bakaYouTube yindlela entle yokongeza kwiinzame zakho zokuthengisa zikaYouTube. Ikunceda ukuba ufumane abalandeli abatsha kungekudala kwaye ufumane ukuthanda, izimvo kunye nezabelo. Ngababhalisi abaninzi, unokwakha uluhlu olubanzi lwe-imeyile oludlala indima ephambili ekwandiseni ukuguqulwa kunye nokuzibandakanya.
Uluhlu lwababhalisi lubonelela ngezikhokelo ezifudumeleyo onokuthi uzisebenzise ekulandeleni, ukubandakanya kwaye ekugqibeleni uguqulele kubathengi. Ukubalwa kwababhalisi bakaYouTube yenye yezinto ezibalulekileyo zokubekwa kwinqanaba. Ukuthenga ababhalisile bakaYouTube abasebenzayo kunceda ishishini lakho lifumane ukuqondwa ngakumbi. Okukhona ubalo lwababhalisi bakho, kokukhona womelela igama lakho kunye nokuthembeka okunokuthi kutsale ababhalisi bezinto eziphilayo kwijelo lakho.
Esinye sezizathu zokuba abantu abaninzi baqale ijelo leYouTube kukwenza imali. Inani leziteshi kuYouTube ezifumana amanani amathandathu ngonyaka linyuke ngeepesenti ezingama-40 unyaka nonyaka ngelixa amajelo afumana i-10,000 yeedola ngonyaka akhule ngeepesenti ezingama-50.
Uninzi lwabasebenzisi be-YouTube abaphumeleleyo bafumana umvuzo wamanani amathandathu kwiYouTube. Umzekelo, ezemali zobuqu u-YouTuber Nate O'Brien unababhalisi be-1.1 yezigidi kwaye uzuze i-444,000 yeedola kwingeniso yentengiso ngonyaka. Iinkwenkwezi eziphezulu ze-YouTube ezifana ne-PewDiePie kunye ne-Smosh zifumana naphi na ukusuka kwi-8.5 yezigidi ukuya kwi-12 yezigidi zeedola.
Ukuqala ukwenza imali kuYouTube, kuya kufuneka ukuba ubuncinci bababhalisi bewaka kwiinyanga ezilishumi elinesibini ezidlulileyo kunye neeyure zokubukela zikawonkewonke ezingama-4000. Xa ufumana aba babhalisi baninzi, uyafaneleka kwiNkqubo yeNtsebenziswano ebonelelwa nguYouTube. Oku kukuvumela ukuba ufumane ingeniso ngokurhuma, iintengiso, intengiso yezinto ezithengiweyo, kunye nobulungu betshaneli.
AdSense Google: Intsebenziswano ikunika ukufikelela kwizixhobo ezikuvumela ukuba wenze imali ngeevidiyo zakho ngeGoogle AdSense. Uninzi lwabantu abadumileyo beYouTube bafumana isixa esikhulu somvuzo wabo kuGoogle AdSense. Umzekelo, ukuba unababhalisi abayi-1,000,000 ababukela iividiyo zakho ezimbini ngeveki, unokufumana ukuya kuthi ga kwi-36,000 yeedola kwi-AdSense yodwa.
Ngokoqikelelo, iimbono ezingama-20,000 ngosuku zinokukunceda ukuba ufumane phakathi kwe-$28 ukuya kwi-$47 ngosuku ngokomndilili, umvuzo wenyanga ube yi-$460 ukuya kwi-$769. Ukuba inani leembono ngosuku lihlala lingaguquki, ungafumana i-5,600 yeedola ukuya kwi-9,353 yeedola ngonyaka.
Intengiso yokuthengisa: Amaqabane kaYouTube anokuthengisa izinto ezilishumi elinambini ngokuvumela eli nqaku kwiakhawunti kaYouTube. Abanye abantu abadumileyo benze izigidi ngokuthengisa izinto kubalandeli babo. I-PewDiePie, inkanyezi yomdlalo wevidiyo waseSweden, inababhalisi be-98 yezigidi kuYouTube kwaye yenza i-6.8 yezigidi zeedola ngenyanga ngokuthengisa izinto ezithengiswayo. Unako nokukhuthaza ukuthengisa / iimveliso kwijelo lakho.
Ubulungu besiteshi: Xa ufumana ababhaliseli be-1000 kwijelo lakho likaYouTube, unokufumana imali ngokwenza inqaku lobulungu bejelo kwiakhawunti yakho. Abalandeli bakho kunye nabalandeli benza iintlawulo zenyanga ukuze bafumane umxholo webhonasi, kubandakanya iincoko ezibukhoma, iividiyo ezikhethekileyo, kunye neebheji. Abadali bevidiyo abaphezulu kuYouTube bafumana i-$40,000 ngenyanga ngobulungu besitishi.
Intengiso ephembelelayo: Ngokuxhomekeke kwi-niche yakho, unokwahlula imithombo yakho yengeniso kunye nentengiso edibeneyo, inkxaso, kunye nezifundo ze-intanethi. Amashishini ahlawula abasebenzisi be-YouTube ngesixa esihle sokulandelayo ukukhuthaza uphawu lwabo okanye imveliso kwisitishi. Abadali beYouTube abadumileyo bayafana ngokulinganayo, ukuba abasebenzi ngakumbi ekukhuthazeni ulwazi lwebrendi xa kuthelekiswa nabantu abadumileyo kunye neempembelelo. Iimpembelelo zikaYouTube zihlala ziyalela amaxabiso aphezulu ukukhuthaza iibrendi xa kuthelekiswa nezithuba ze-Instagram. Ungafumana i-$2000 ngevidiyo nganye ukuba unababhalisi be-100k.
Ngokophononongo, umntu okumgangatho ophakathi ubiza i-2,000 yeedola ngababhalisi be-100,000 ukukhuthaza uphawu kwiakhawunti yabo yeYouTube.
Ukutsala ababhalisi bokwenyani
Abathengisi baphakamisa oko kwaziwa ngokuba 'yingqondo yomhlambi' ukunyusa intengiso kunye nokuzibandakanya. Ingqondo yomhlambi ibhekisa kwindlela abantu abaphenjelelwa ngayo ngabanye ukuba benze into ethile kuba uninzi lwabantu luyenza.
Njengezilwanyana zentlalo, sithembele kulwazi oluvela kwabanye ukwenza izigqibo. Ukusuka kukhetho lwekhondo lomsebenzi, utyekelo lwezopolitiko ukuya kwiiwodrophu, utyekelo lwethu lulolongwa luqwalaselo lwethu lwentlalo. Iingcali zengqondo ziye zafunda indlela amaqhinga okufunda ezentlalo abumba ngayo ubukrelekrele beqela labantu.
Bafumanise ukuba abantu bayathanda ukukopa abanye, kwaye okukhona bebaninzi abantu abenza ukhetho oluthile, kokukhona abanye abantu bebakopa. Le ikwayindlela enye abantu abakhetha ngayo usetyenziso olusekwe kumanani abo okhuphelo okanye balandele iiakhawunti zemidiya yoluntu ezinokulandela okukhulu. Kukwayinyani ukuba xa abantu bekhangela kwaye befumana ividiyo enababhalisi abaninzi, iimbono, kunye nezinto abazithandayo, bathatha isigqibo sokuyilandela loo vidiyo. Xa ababukeli bebona ukuba ukufikelela kwevidiyo kusezantsi, baye bacinge ukuba umxholo awufanelanga ukubukelwa. Banokuqhubela phambili ngokukhawuleza kwaye bakhangele ividiyo efanayo kwisitishi sikaYouTube esidumileyo esinombukeli omkhulu.
Ukunqongophala kwababhalisile kwijelo lakho likaYouTube kuya kuthoba namathuba okuba ividiyo yakho ifumane ukuthanda, izimvo, okanye ukwabelana njengoko ababukeli bengaqinisekanga ukuba ngumthombo othembekileyo wolwazi. Xa uhlawula ababhalisile, uya kuphucula amathuba abanye abantu ukuba babe ngabalandeli bakho kunye nababhalisi ngenxa nje 'yengqondo yomhlambi.'
Esinye sezizathu ezibalulekileyo zokuthenga ababhalisile bakaYouTube kukunyusa igunya lebhrendi yakho/yobuqu. Ukuba nababhalisile abaninzi kwijelo lakho leYouTube kubonisa ukuba ungumdlali obalulekileyo kwi-niche xa kuthelekiswa neqaqobana lababhalisi. Njengoko kubonisiwe ngasentla, umrhumi omkhulu kukuvulela amathuba okwenza imali eninzi, ukusebenzisana nabanye abachwephesha kunye nabaphembeleli.
Ngokophononongo luka-2019 olwenziwa ngokungxama kwe-SEM, iipesenti ezingama-48 zabantu zikholelwa ukuba iYouTube iya kuba ligalelo eliphezulu ukunyusa ukusebenza konxibelelwano loluntu kule minyaka mihlanu izayo. Nokuba i-niche yakho ilele kwi-PR, ifashoni, i-skincare, imali, umdlalo, okanye umdlalo ohlekisayo, ukufumana ababhalisile abaninzi kuYouTube kunokukunceda ukuba uzimise njengengcali yeshishini.
Ababhalisi badlala indima ephambili kwimpumelelo yakho njengoYouTube. Kanye ukusuka kumathuba okwenza imali, ukwandisa ukufikelela, ukufumana ukuthandwa kwinethiwekhi, inani elikhulu lababhalisile libonelela ngeenzuzo ezininzi. Kwabangenayo abatsha kwiqonga, ukufumana ababhalisile kunye nokwakha ukuthembeka kunokuba ngumngeni. Kufuna umgudu ongaguqukiyo ngelixa kuthatha ixesha ukufumana abalandeli bakho bokuqala abali-1000. Njengoko uphononongo lubonisa, kunokuthatha iminyaka emibini ukufumana ababhalisile abaliwaka.
Ukonyusa inani lababhalisi beYouTube kunokubandakanya ukunikela ingqalelo engakumbi kumgangatho wevidiyo, ukulayisha rhoqo, ukwenziwa kwenjini yokukhangela (SEO) ukonyusa umgangatho wokukhangela wevidiyo yakho kunye nezinye iindlela. Ngelixa ezi nzame ziyimfuneko, kuya kufuneka uchithe ixesha elininzi ukuze ufumane zonke iinkalo zevidiyo yakho yeYouTube ngokufanelekileyo. Ngaphandle kokwenza ividiyo ekumgangatho ophezulu, ebandakanyekayo, banokungabikho baninzi ababhalisile kwiminyaka embalwa yokuqala.
Xa uthenga ababhalisile, kuya kunceda ukwakha isiseko sabalandeli bakho ngexesha elikhawulezayo kunye nomzamo omncinci. Endaweni yokuba ube nexhala malunga nenani lababhalisi bakho, unokugxila ekudaleni iividiyo ezintsha, ezibandakanyayo ezinomtsalane kubaphulaphuli bakho.
Ngokuka-Aherfs, ukubeka phezulu kumaphepha okukhangela kuGoogle kunye neYouTube yeyona nto iphambili kubathengisi bedijithali kuba:
Ipesenti ze-68 zamava e-intanethi aqala nge-injini yokukhangela - abantu banokufumana ngakumbi ividiyo yakho ukuba ubeka phezulu kwi-injini yokukhangela.
Iipesenti ezingama-75 zabakhangeli bakaGoogle abagqithi ngaphaya kweziphumo zephepha lokuqala, kwaye kuphela ipesenti ze-0.78 zabasebenzisi abacofa kwiziphumo zokukhangela kwiphepha lesibini.
Zininzi izinto onokuzenza ukonyusa izinga levidiyo yakho yeYouTube kuGoogle. Oku kubandakanya ukufumana kunye nokusetyenziswa kwamagama angundoqo afanelekileyo (la ngamagama asetyenziswa ngabaphulaphuli bakho ukukhangela umxholo ofana nowakho), ukongeza iithegi zikaYouTube, kunye nokuphucula umgangatho wevidiyo yakho yeYouTube. Eyona ndlela ikhawulezayo, nangona kunjalo, kukunyusa inani lababhalisi bakho.
NgokukaNeil Patel, iYouTube ibeka iividiyo ngokusekwe:
Ukufaneleka kwegama elingundoqo
Ukuthembana kuqhagamshelwe kwinani lababhalisi itshaneli likaYouTube elinalo ngaphandle kweembono kunye negunya. Uphononongo lubonisa ukuba inani lezinto ezithandwayo, iimbono, izimvo, kunye nezabelo kwividiyo yeYouTube inxibelelene kakhulu nemigangatho ephezulu yeYouTube. Isizathu esibalulekileyo sokuhlawulela ababhalisile beYouTube kukuba unokonyusa ukuthanda, ukujonga, kunye nezimvo kwividiyo yakho ngokufumana ababhalisile bokwenyani kunye nokwandisa ukufikelela kwakho.
Iziteshi zeYouTube ezinababhalisi abaninzi zifumana ukubekwa phambili kukhangelo olwenziwe kuGoogle nakwindawo kuYouTube. Inani lababhalisi ikwayeyona nto iphambili esetyenziswa zii-algorithms zikaYouTube ukukala iividiyo. Ngelixa ukugqabaza okanye ukuthanda kusisenzo sexesha elinye, imirhumo ibonisa ukuba abantu baya kubona umxholo wevidiyo owenze rhoqo. Oku kudlala indima ephambili ekuboniseni ixabiso olinikezelayo kuYouTube.
Esi sizathu sokuba uninzi lwe-YouTubers lukhuthaze ukubhaliswa.
Nokuba bavela phi na ababhalisi bakho, ukuba nababhalisi abaninzi kuya kunceda ukwandisa i-SEO yakho. Oku kuqinisekisa ukuba ividiyo yakho ifunyenwe kwaye ijongwe ngabaphulaphuli abaninzi. Ngenxa yoko, kokukhona inani labantu abajonga umxholo wakho, kokukhona linyuka ukuhamba kwababhalisi bezinto eziphilayo kwijelo lakho leYouTube.
Ukucela abantu ukuba bashiye izimvo kuya kusebenza ukonyusa umgangatho wevidiyo yakho kuYouTube. Ukwakha isiseko sakho sobhaliso linyathelo lokuqala lokwamkela ezi zicwangciso zokubeka phezulu.
Bandakanya ababhalisile bakho
Ukuba nesiseko esilungileyo somrhumo konyusa ukuzithemba kwakho xa usaqala ukuba nguYouTube. Oku kuyasebenza nakwabo kudala besenza iividiyo zeYouTube kodwa abakwazanga ukwakha isiseko sabo sababhalisi.
Nje ukuba ube nesixa esibalulekileyo sababhalisi kunye neembono, uya kuziva unomdla wokongeza umxholo omtsha rhoqo. Yenza iividiyo kubugcisa bakho, umculo, uhambo, ukutya, okanye umsebenzi wakho ukubandakanya ababhalisile bakho bokwenyani.
Unokwenza ividiyo yobuqu ukwamkela ababhalisile bakho bokwenyani kwaye ubenze bazive bexatyisiwe kwaye bekhethekileyo. Ukongeza i-watermark yoqobo kwividiyo yakho ayizukukhusela kuphela ividiyo yakho kodwa yenza ukuba ababukeli bacofe kuyo kwaye babhalise kwitshaneli yakho. Iqhosha lokubhalisa livela ngokuzenzekelayo kwi-watermark yakho yoqobo.
Ukubandakanya ababhalisile bakho kuya kubandakanya ukwenza iividiyo ezinomtsalane kwizinto abazithandayo. Nazi ezinye izibalo zikaHubSpot ezibonisa uhlobo lomxholo ababukeli bakaYouTube abakhethayo:
Iividiyo zomculo yenye yezona zidumileyo kuYouTube.
Iividiyo ezinxulumene nokuthenga zineeyure eziphindwe kahlanu zokubukela kutsha nje.
I-YouTube yenza iipesenti ezingama-70 zababukeli bazi ngeempawu.
Ababukeli banethuba eliphindwe kabini lokuthenga imveliso abayibukele kuYouTube.
Xa kuthelekiswa namanye amaqonga, ababukeli banokukhangela ulwazi malunga nenkonzo, imveliso, okanye uphawu kuYouTube.
Iividiyo zokufundisa kuYouTube zikhethwa ngabasebenzisi bakaYouTube ngaphezu kokufunda incwadi yemveliso okanye imiyalelo.
Izizathu eziphezulu zokubukela iYouTube kukuziva wonwabile kwaye ukhululekile.
Iividiyo zokuphumla ezinje ngokusika isepha ziye zanonyuswa ngeepesenti ezingama-70 kwixesha lokubukela.
Iividiyo ezihlekisayo kunye "nendlela yokwenza" zezinye iindidi ezidumileyo zomxholo weYouTube.
Yandisa ialgorithm yeYouTube
I-algorithm yeYouTube icacisiwe kwaye ithatha isigqibo malunga nesithathu-kwesine seevidiyo ezibukelwa ngababukeli bakaYouTube. Iingcebiso zikaYouTube zisekwe kwiimetrics ezininzi ezinje ngababhalisi, imbali yokubukela, ixesha lokubukela, ukufaneleka, kunye nokuzibandakanya. Isizathu esiphambili sokuthenga ababhalisile kukuba i-algorithm inokuthi iphakamise ividiyo yakho kubabukeli abaninzi.
Ukuthenga ababhalisile bakaYouTube kulula kwaye kuyakhawuleza
Ukuba unenkxalabo malunga neenkathazo zokufumana indawo efanelekileyo yokuthenga i-subs, nasi isisombululo esilula. I-YTpals yindawo ehamba phambili kuyo bathenge ababhalisile kwiYouTube. Unokulindela iziphumo ezikhawulezayo kunye nenkqubo elungelelanisiweyo yokuthenga. Ungathenga ababhalisi beYouTube bokuqala abangama-50 ngexabiso eliphantsi njenge-20 yeedola, ngelixa iimbono ze-5000 zixabisa i-60 yeedola.
Unokukhetha iimbono zasimahla zeYouTube ukukhawulezisa indlela yakho yokwakha isiseko sababhalisi bakho, izinto ozithandayo, izimvo kunye nezabelo.
I-YTpals inamaxabiso akhuphisanayo kwizinto ezithandwa nguYouTube, izimvo, iiyure zokubukela, kunye nezabelo ezinokwandisa isicwangciso sakho sokuthengisa sikaYouTube. Xa uhlawula ababhalisile, uya kuqala ukubafumana kwiiyure ezingama-24. Nje ukuba ubone izibonelelo ezibambekayo zokufumana ababhalisile kuYouTube, unokunyusa ngokuthe ngcembe inani lababhalisile ukuya kwi-100, 500, okanye ngaphezulu.
Ukuba ufuna ukuthenga izimvo, i-YTpals inikezela ngezimvo zesiko ngamaxabiso afikelelekayo. Unokuthenga izimvo ezilishumi zesiko ngoko nangoko kwividiyo yakho yeYouTube oyilayishile ngexabiso eliphantsi. Ungaphinda uthenge ama-30 okanye ama-50 amagqabantshintshi kumaxabiso akhuphisanayo. Xa kufikwa kwizinto ezithandwayo, i-YTpals ibonelela ngama-200 okuthandwa nguYouTube ngeedola ezingama-20.
Ukuthenga zonke njengenqwaba kuya kubonelela ngesiseko esiluqilima osidingayo ukuze uthathe isitishi sakho sikaYouTube siye kumanqanaba amatsha empumelelo.
Jonga ukuba bathini abathengi bethu xa bathenga ababhalisile kwiYouTube
Ababhalisi ku-YouTube bongeziwe kwinqwelo yakho.